PressReader - Kwayedza: 2018-11-23 - TSOTSI KUITA NHOKO
TSOTSI KUITA NHOKO
Kwayedza - 2018-11-23 - Front Page - Ray Bande ari kwaMUTARE
MURUME wekwaMambo Saunyama, kwaMutare, anonzi azofa ava kuita nhoko dzinenge dzembudzi uye pane fungidziro huru yekuti izvi zvakaitika mushure mekunge aba mbudzi dzevaridzi.
Zvinonzi akange aba mbudzi idzi mubhuku rekwaChigo­dora, kwaMutare kwekare.
Lloyd Chirara, wemubhuku raGombakom­ba, anonzi akafa svondo rapera pamberi achiita tsvina yetubhora tudiki-diki utwo twainge twakaomara­ra zvekufanan­a nenhoko dzembudzi.
Chigodora iri makiromita mashoma kubva muguta reMutare.
Rufu rwemurume uyu rwakonzera mitauro yakawanda kwaChigodo­ra nemamwe mabhuku akapotered­za apo vanhu vakuru nevadiki vari kuratidza kushamiswa zvikuru nechiitiko ichi.
Mbavha dzezvipfuy­o dzinonzi dzarura zvikuru kwaChigodo­ra nenzvimbo dzakapoter­edza.
Mumwe mugari wekwaChigo­dora, VaCharles Nyambunga (52), vanoti zviri kuzivikanw­a munharaund­a yavo kuti Lloyd akafa mushure mekunge oita tsvina yenhoko sedzembudz­i.
“Iye zvino kwadarika mwedzi nechidimbu mombe yangu yakabiwa uye svondo rimwe chete iri mbavha idzi dzakadzoka ndokubazve mbudzi. Ndakange ndisina ruzivo pamusoro pembavha yainge yandibira mombe zvose nembudzi.
“Zvisinei, nguva pfupi yadarika baba vangu vakazouya vakandiudz­a kuti Lloyd Chirara akange asinganzwe zvakanaka. Vakanditi ari kuita nhoko sembudzi uye zvaizivika­nwa kuti akashandis­irwa mushonga mushure mekunge aba zvi- pfuyo mumisha ine chitsama munharaund­a yedu.
“Vanhu munzvimbo ino vari kuziva nezvenyaya iyi kunyangwe zvazvo hama dzake dzisingade kuti zvibude pachena.
“Zvisinei hazvo (Lloyd) akatadza kureurura kuba kwaakaita kuitira kuti abatsirwe pachine nguva uye hama dzake dzakazomut­ora ndokuenda naya kuchipatar­a mushure mekunge vapererwa uko akafa achangopin­zwa muchipatar­a,” vanodaro.
Imwe hama yaLloyd inogara pedyo nemusha wemushakab­vu uyu inotsinhir­a kuti akafa achiita nhoko sedzembudz­i asi ndokukumbi­risa kuti zita rake risabursit­swe muKwayedza.
“Ichokwadi. Aiita nhoko dzembudzi uye tose tinozviziv­a nekuti imwe hama yedu yakaenda kunotsvaga rubatsiro kun’anga mushure mekunge abirwa mbudzi dzake. Tinoziva munhu wacho akaenda kun’anga nekuti akapa Lloyd mukana wekuti areurure kuitira kuti aroyonorwe asi akaramba achiti handiye akange aba mbudzi idzi kusvikira apo pakange pasisina zvekuita,” anodaro.
Nancy Mponda (37) anoti akabirwawo mbudzi 10 uye shanu dzacho dzaive diki idzo dzakangour­aiwa nenzira yehutsinye ndokusiiwa pamusha pake.
Anoti akanzwawo nyaya yekuti Lloyd akazofa ava kuita tsvina inenge nhoko dzembudzi.
“Ndakamuka rimwe zuva ndikanzwa mwana wangu achindishe­vedza panze achiti mbudzi dzedu dzose dzainge dzafa. Ndakabuda panze ndikaona mbudzi shanu dzainge dzauraiwa.
“Handina kukwanisa kuona dzimwe shanu dzacho uye ndakabva ndaziva kuti dzainge dzabiwa.
“Takatadza kuziva kuti ndiani akaita izvi, kunyangwe takamhan’ara nyaya iyi kumapurisa emunharaun­da asi mbavha idzi hadzina kubatwa. Pave paye, takazonzwa kuti Lloyd Chirara ari kurwara. Hanzi aiita nhoko dzembudzi kusvikira azofa,” anodaro Mponda.
Munashe Njerere, uyo mhuri yavo yakabirwaw­o mbudzi, anoti akaudzwa kuti Lloyd akafa achiita nhoko sedzembudz­i.
“Hongu, mbudzi dzedu dzakabiwa uye hatina kudziwana. Vakawanda munharaund­a ino vanoziva nezvenyaya yaChirara. Pane fungidziro huru yekuti ndiye aiba mbudzi muno achibatsir­ana neshamwari yake inozivikan­wa.
“Hazvina kushamisa vanhu vakawanda muno pavakanzwa nyaya yenhoko dzembudzi nekuti Chirara neshamwari yake vanga vakonzera marwadzo kuvagari vakawanda. Munogona kubvunza munhu upi zvake uye vanokuudza­i pfumvu yaakaona kusvika azofa,” anodaro.
Zvisinei, hama dzaLloyd dziri kuramba kuti murume uyu akafa achiita nhoko.
“Aya mashoko egodo, hakuna zvakadaro. Akange aine utachiona hweHIV iye ndokurega kunwa mushonga wake. Patakazoen­da naye kuchipatar­a zvakange zvisisabat­sire. Akafa achangopin­da muchipatar­a asina kana kumbopihwa mushonga.
“Ndinotadza kunzwisisa kuti chinangwa chevanhu vari kutaura manyepo aya ndechei. Ndinozvizi­va vanhu vainge vakavenga munin’ina wangu uye mumwe wavo akatondiud­za pameso pangu kuti ainge akamuvenga.
“Akandiudza mashoko aya apo tainge tichiri kuchema, tisati taviga munin’ina wangu. Ndinoshuvi­ra kuti kudai mandiudza kuti ndiani ari kutaura manyepo ose aya,” anodaro Gift Chirara, anova mukoma waLlyod.
Kunyangwe zvazvo ari kuramba kuti munin’ina wake akafa achiita nhoko sembudzi, Gift anotsinhir­a kuti pamusha pavo pakabiwawo mbudzi uye dzimwe hama dzavo dzakarozvw­awo.
Zvichakada­i, ongororo yakaitwa maringe neruzivo rwesainzi padandemut­ande reGoogle inoratidza kuti munhu anogona kuita tsvina yakafanana nenhoko dzembudzi kana muchikafu chaanodya mukashaikw­a fiber.
Fiber iyi inonzi mushure mekunge yagaiwa nemabhakir­iya ari mumatumbu, inobatsira pakuti tsvina iwande uye ichiitawo kuti ibude zvakanaka.
Mhuri yekwaChira­ra vari kwaGombako­mba mushure mekuviga Lloyd
Gift Chirara (kuruboshwe) aine vamwe vemumhuri yavo